Real Madrid Oo Haatanba Bilawday Qorshayasha Suuqa Kala Iibsiga Bisha January Iyo Diirada Los Blancos Oo Haysa Mid Kamid Ah Daafacyada Ugu Fiican La Liga – GOOL24.NET
Real Madrid Oo Haatanba Bilawday Qorshayasha Suuqa Kala Iibsiga Bisha January Iyo Diirada Los Blancos Oo Haysa Mid Kamid Ah Daafacyada Ugu Fiican La Liga
Kooxda Real Madrid ayaa u muuqata mid haatanba bilawday hawl-galada suuqa kala iibsiga bisha January ee suuqa kala iibsiga waxaana ay calaamadsadeen daafaca kooxda Espanyol ee Mario Hermoso.
Hermoso ayaa kamid ah xiddigaha ugu bandhiga fiican horyaalka La Liga haatan waxaana uu dhawaan kasbaday kalsoonida tababare Luis Enrique oo ku daray liiska xulka Spain ee dhawaan kulamada caalamiga ah dheeli doona.
Real aya daafacan hore uga iibisay kooxda Espanyol waxaana ay haatan dib ugula saxeexan karaan aduun dhan 7.5 Milyan, Sababaha ugu waaweyn ee Madrid ku qasbaya inay saxeexa da’yarkan u dhaqaaqdo ayaa ah maadaama oo uu wali dhaawac ku maqan yahay Jesus Vallejo.
Espanyol ayaan doonayn inay marnaba iska iibiso Mario Hermoso maadaama oo uu shaqsi muhiim ah ka yahay kooxda balse sababta ugu weyn ee ku qasbi karta ayaa ah in mulkiilaha kooxda ee Chen Yansheng uu u baahan yahay lacago uu ku dheeli tiro xisaabaadka kooxdiisa.
Madrid ayaan kali ku ahayn xiisaha xiddigan maadaama oo kooxo badan oo ay ugu horreyso Arsenal ay si dhaw ula socdaan xaaladiisa iyadoo Unai Emery uu taageere weyn u yahay xiddigan isla markaana uu daawaday wax hal mar ka badan.
Si kastaba ha ahaatee, Los Blancos ayaa saxeexa xiddigan samayn karta suuqa inagu soo wajahan ee January maadaama oo ay kooxda ka muuqato xaalad daafac xumo xilli ciyaareedkan.